Gunaanadka SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran(Qeybtii 12aad) | Somalidiasporanews.Com
Gunaanadka SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran(Qeybtii 12aad)
December 4, 2012 | Filed under: Features,Wararkii ugu Dambeeyay | Posted by: Webmaster Fariin kooban: akhristayaal iyo saaxiibayaal, waxan idinla wadaagayaa dhawr arimood oo ay tahay inaan tilmaamo inta aanan qaybta ugu dambaysa ee sheekada iyo idinka idiin kala bixin. Waxan ugu horaynba halkan uga mahad celinayaa asxaabta iyo akhristayaashii emails ka, telefoonada, facebook iyo sida tooska ahba iigu soo war celiyay markay sheekadan akhriyeen, inta soo socotana waan ka dhur sugayaa. Waxan u mahad celinayaa bahda websites yada, intoodii aan tooska ula xidhiidhay, iyo intii iyaka ka sii xigatay sheekada ee aniga ogolaanshaha I soo waydiiyayba. Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin. Sheekadan aan manta soo khatimaynaa, sidaan horeyba u sheegnay, waxay kaalinta koobaad ka gashay tartankii sanadlaha ahaa ee Sheeko iyo Shaahid – 2012, waxaana lagu daabacay ogolaansho rasmi ah oo ay bixisay shirkada barnaamijkaas abaabusha. Sheekadani waxay qayb ka noqon doontaa sheekooyin ku soo bixi doontaa buug soo baxaaya 2013 ka horaantiisa oo ay ku jiraan lixdii sheeko ee ugu horeeyay tartankaas 2012.
Al-muhim, wax laga dhur sugoba, waatii diyaaradii Soo caggo dhigatay, ee sidii lagu balamay, salaan iyo ubaxyo lagu boobay markii uu Fatxi ka soo baxayba. Waakii diyaaradii kala soo dagay magaciisa cusub ee Professor Fatxi Xaaji Yaasiin, dadkiina gacanta u taagay isagoo aad u yaaban. Waxa se qosol iyo maadiba ka dhacday markii isagoo mikirfoonkii shaadhka ku xidhan, oo is ilawsan uu saaxiibkiis Qaadiro la faqay ee yidhi, “Dadkani ma wada Reer-Qudhac baa?” Waakii maalintii xigtayba odayaashii la shiray, ee aad u hadlay. Waa hadlay oo hadana hadlay, wax macno badan lehna ma sheegin. Waxoogaygii loo laqimay ee ahaa inuu wax qabad ka hadlo, iyo intii uu iskaba yaqaanay ee beelaha ku saabsanayd buu hadba mid ku booday. Waakii yidhi, “Anigu wax badan baan wadanka ka maqnaa, isaga uun baanan u maqnaa. Anigu Carab iyo Cajam ba waan soo arkay, bari iyo Galbeedba waan tagay, Yurub wadan aanan cagaha dhigin na waa yaryahay. Manta aqoonyahan iyo waayo arag dhab ah baan ahay. Waxan ka shaqeeyay warshad cuntada ah oo Smith Baykary la yidhaaho oo Soomaali iyo Afrikaan toona aanu fooda galinin,